Ciidanka Booliska Somaliland ayaa xiray nin ay isku magac noqdeen madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo). - Magudhe news
Oraaha dad waynaha
Qalin Ku Qor
Ciidanka Booliska Somaliland ayaa xiray nin ay isku magac noqdeen madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo).
Ninkan ayaa isna magaciisa la yiraahdaa Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo) waxaana uu muddo laba cisho ah u xirnaa ciidamada nabad-galyadda wadooyinka, iyadoo lagu haysto inay isku magac yihiin Madaxweynaha Somaliland.
Wararka ayaa sheegaya in ninkan uu macalin ka yahay iskuul gaar loo leeyahay oo Hargeysa ku yaalla.
“Macalin kaliya ma ahayn ee maamule ku xigeenka dugsiyadda sare ee wiilasha ee dugsiga Nuuradiin ayuu ahaa waxaa magaciisa la yiraahda Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo, waxaana magaca Siilaanyo loo bixiyey muddo dheer ka hor wakhtigii uu madaxweyne Siilaanyo ahaa guddoomiyihii jabhaddii SNM, jacayl la jecel yahay Siilaanyo ayaa loogu bixiyey markii saddexda magac ee hore ay iskaga ekaadeen” ayuu yiri Mahdi Ibraahim oo ah maamulaha guud ee dugsiga Nuuradiin.
Taliyaha booliska Somaliland C/llaahi Fadal Iimaan oo isna dhankiisa la waydiiyey xariga macalinka ayaa sheegay in ninkan uu bedelay naanaystii uu la baxay ee Siilaanyo, uuna la baxay naanays kale oo ah Xaddi taasoo keentay buu yiri xarigiisa.
Magaalooyinka Somaliland iyo baraha bulshada ayaa xariga ninkan si weyn looga hadal hayay 24-kii saac ee la soo dhaafay, waxaana dad badan la yaab ku noqotay in qof dhan uu xoriyadiisa ku waayo sabab la xiriirta magac uu la baxay.
Previous PostQabiilada iyo Magacyada Wasiir ku-xigeenada cusub ee xukuumada SoomaaliyaNext PostDaawo Muuqaal : Wasiirkii hore ee Warfaafinta Somalia oo soo bandhigay arin dad badan ka qarsooneed
Magudhe news waxaad ka helaysaa warar ku salaysan xaqiiqada ay ku soo diyaarsheen macalimiin xirfad gaara u leh saxaafada iyo suxufinimadaba
Copyright © 2017 Magudhe news All Rights Reserved.